Rekodha pamhepo roulette manhamba
Lobby Miner iri roulette software nyowani iyo inokutendera iwe kuti utore otomatiki online roulette manhamba kwemazuva.
Kuva nechombo chakadaro chauinacho chaizvo zvakakosha zvikuru, nekuti inobvumidza mutambi kuongorora manhamba kana kumisikidza marongero emitambo kusvika parizvino asingakwanise kujekesa.
Hazvina kuitika kuti mumwedzi ichangopfuura mabasa mazhinji epamhepo akaberekwa ayo anopa kunyoreswa kwemwedzi kubvumira mutambi kuti agamuchire zviyeuchidzo zvichibva pane Lobby kuongorora yepamhepo kasino, ndiyo peji yeinternet yekasino inoratidza manhamba azvino kuburitswa pamatafura akasiyana siyana eroulette.
Mashandiro anoita Lobby Miner
Lobby Miner zviri nyore kwazvo kushandisa, ingoitanga uye mushure mekupinda yekumisikidza kodhi, kurodha iyo kasino peji kune iyo software inonongedza nekudzvanya pane bhatani Load Lobby.
Chenjera: peji rakatakurwa ndere remupi weItari, saka kune vese vatambi veItari hapazove nedambudziko mukushandisa Lobby Miner, kune avo vanogara mune dzimwe nyika, zvinogona kunge zvisingaite kurodha peji uye nekudaro software yacho haishande.
Ndiani anogona kunge achifarira Lobby Miner ndinofanira kuzviedza shoma kutenga bhuku iri kuAmazon, nekuti hazvizogone kuti ndipindire kuti ndishandure kodhi chaizvo nekuti ini zvakare handigone kubatana nemapuratifomu ekunze emitambo.
Kana usiri mugari weItaly uye usingakwanise kuona iyo peji inotakura Lobby Miner, shandisa a VPN inogona kunge iri zano rakanaka, asi padambudziko iri, mutambi anofanira kutora matanho kuti awane mhinduro.
Kamwe iyo kasino yekuchengetedza inotakurwa nebhatani Load Lobby, ingodzvanya bhatani repiri Kutanga Kuchera uye Lobby Miner ichatanga kurekodha ese tafura nhamba dziri papeji.
Pari zvino pane matafura makumi maviri munzvimbo yekutandarira, ese anobva kuchikuva chinozivikanwa Playtech, asi zviviri zvacho hazviratidze kuteedzana kwenhamba dzakaburitswa munzvimbo yekutandarira, saka kunyoreswa kuchaitika panguva imwe chete 18 matafura.
Yese data yematafura gumi nesere inozo nyorwa mumafaira akawanda, ari mufaira Zvabudiswa yechirongwa.
Iwe unogona zvakare kubaya pane bhatani kuti uwane iyo folda Dhata Dhata, pamwe nekujekesa zvirimo mumafaira ese tinya bhatani Reset Mafaira.
Shandisa iyo data yakaunganidzwa naLobby Miner
Iwo mashandisiro acho haagumi, chimbofunga kuti imwe software inonakidza yave ichiwanikwa kwenguva yakati rebei ThatsLuck ivo vanoshandisa mameseji mafaera ekuongorora kwehuwandu, senge:
►Roulette Super Stats iyo yaunogona kuongorora kuwanda, kunonoka uye kudzokorora kwenhamba kana mikana yakatsaukana mukati menguva chaiyo;
►Roulette Bias Sniper iyo yaunogona kutarisa nayo matafura gumi nemasere kana kusarura kuchiitika pasina kunyora manhamba netafura yakavhurwa uyezve imwe panguva.
►Roulette Trends Hunter iyo yaunogona kubatirira nayo miitiro yemikana yakasiyana (kana zvikamu) kushandisa kwavo kuenderera.
Zvimwe zvishandiso zvichaburitswa munguva pfupi kuti zviite zvakanyanya Lobby Miner, Ndiyo software nyowani iyo nekubatanidza kune akasiyana mameseji mafaera akanyorwa naLobby Miner, anokwanisa kuyambira munguva chaiyo mutambi maererano nezano raanoda kushandisa.
Sezvo zvinyorwa zveLobby Miner
Sekupedzisira ruzivo ini ndinofunga zvinobatsira kuzivisa kuti kunyoreswa kunoitika nenzira iyi: patafura yega yega nhamba inonyangarika kubva mukuteedzana kwenhamba shanu dzinogona kuonekwa munzvimbo yekuchengetedza inowedzerwa kune iyo faira faira.
Saka kana semuenzaniso patafura iwe ukaona kuti nhamba 1-2-3-4-5 dzabuda, panongobuda nhamba nyowani kuteedzana kuri pavhidhiyo kuchave 23-1-2-3-4 uye saka iyo nhamba 5 ichawedzerwa kune iyo faira faira yetafura iyoyo. Izvi mukuita zvinoreva kuti ongororo dzinoitika pamwe nekuverengera kunonoka kwema 4 kana mashanu manhamba achienzaniswa nemhando dzinoonekwa pane peji rewebhu.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, ini ndinokuzivisa iwe kuti iyi software inogona kumira kushanda nhasi uye chero zvodii hapazove nemahara kukwidziridzwa, nekuti kana semuenzaniso mupi anosarudza kugadzirisa iyo peji rewebhu kuti asaratidze iwo manhamba, kana kuti ndoda kugadzirisa iyo Java kodhi yeiyo peji kudzivirira kunyoreswa kwenhamba, ini ndinogona kusakwanisa kuita kuti software ishande zvakare.
Funga saka sekugona kurasikirwa neinvestment diki iwe yauchazogadzira yekutenga bhuku reichi kana zvimwe zvirongwa zvinogona kuverengerwa neLobby Miner. Ndizvo.
Nakidzwa uye usakanganwa kunyorera kuchiteshi cheTeregiramu kana iwe uchida kuferefeta nhau dzese pane dziri kuuya zvinyorwa.